रातको साढे १० वजे र त्यो ५ मिनेटको बाटो . . . | Pennepal
Home बिचार रातको साढे १० वजे र त्यो ५ मिनेटको बाटो . . .
रातको साढे १० वजे र त्यो ५ मिनेटको बाटो . . .
एउटा केटी हुनु कति डरलाग्दो हुन्छ अनुभव मैले त्यो रात गरें । त्यो दिन मौसमले कोल्टे फेर्दै थियो । पानी बाक्लै परिरहेको थियो । कम्प्युटरमा आफ्नो काम आफ्नै गतिमा हुँदै थियो । यस्तैमा गिलो माटोको सुगन्ध कोठामा फैलियो ।झ्याल खालेर बाहिर नियालें पानीले सडक निथ्रुक्क थियो । पानी रहने कुनै छेकछन्द थिएन । पानीबाट जोगिन मानिस टाउकोमाथि हात राखेर दगुर्दै थिए ।
मौसमको यो रूप साच्चै खुसी बनाउने थियो । समय गुज्रदैं थियो, रात अझै कालो हुँदै थियो र संगै पानी थोपा अझ बाक्लदैं थियो । सुरुमा त मौसमको यो रूपले मोहित बनाएको थियो । मनमा आनन्द दिएको थियो, तर घडीको सूईसंगै मनमा चिन्ता पनि बढदैं थियो । एक घण्टा वित्यो तर, पानी रोकिने छाँट देखिएन । अब अभिको त्यो आनन्द समस्या बन्न थाल्यो ।
सोचें पानी रोकिएन भने घर जान ट्याक्सी बोलाउनु पर्छ । एपको सहयोगले घरसम्म जान ट्याक्सी बोलाउने संघर्ष सुरु भयो । धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्भव भएन । नचाहेर पनि अफिसमा रोकिनु पर्ने स्थिति बन्दै थियो ।
केही समयमा पानीको कहर त रोकियो तर, ट्याक्सी बोलाउन एपले सहयोग गरिरहेको थिएन । मनले एक्कासी सम्झ्यो, नजिकै मेट्रो रेलको स्टेशन छ, पाँच मिनेटको दूरीमा । मेट्रोबाट घर जान सकिन्छ । त्यो सुरक्षित पनि छ । मैले छोटो बाटोको सट्टा मेन सडकलाईनै रोज्न उपयुक्त सम्झे, कनिभने मानिसको आवागमन भइरहेको हुन्छ ।
मलाई पाँचै मिनेट त हिडनु थियो, यही सोचेर म अफिसबाट निस्कें । मैले पुरा शरीर छोपें र टाउको पनि । मेरो अफिसबाट मेट्रो स्टेशनबीचको पाँच मिनेटले मलाई महशुस गरायो, यो समाजले रातको अंध्यारोमा तपाइलाई कुन नजरले हेर्छ । मानिसको आँखाले मेरो अनुहारको स्कार्फ छेडेर मलाई हेर्थे ।
वाइकमा आउने जाने मानिसको शब्द मलाई तिखो वाणजस्तो लाग्थ्यो । उनीहरूको शब्दको जवाफमा मैले प्रयोग गर्ने शब्द जस्तो प्रयोग गरे पनि श्लिलनै हुन्थ्यो होला । हरेक कमेंटले मेरो अन्तर्आत्मा हल्लाएर राख्थ्यो । मैले अनुहार उठाएर हेनेृ कोशिस पनि गरें के कसैको आँखामा नारीप्रति सम्मान अझै बाँकि छ ? तर अफशोच त्यो बाटो त्यस्ता मानिस हिडिरहेका थिए, जो सबै एउटै भाषाको प्रयोग गरिरहेका थिए र सबैको आँखा राक्षसी थिए । केही मानिस यस्ता पनि थिए जसलाई यसको कुनै मतलब थिएन ।
यी ती मान्छेजस्ता देखिन्थे जो तमाशा हेर्न भिड बढाउने काम मात्र गर्छन । अहिले यो पाँच मिनेटको बाटोमा यी शब्द काफ िथिएनन्, मानिस चिल्ला चिल्ला कारमा बसेका पनि झ्याल नखोली मलाई यो महशुस गराउँदै थिए कि यति रातमा तिमि एक्लै किन निश्केकी त ! पानीले भरिएको बाटोमा चिल्ला कारले मलाई हिलो छ्याप्दै हिडेर उसलाई के आनन्द आएको होला ? म अफिसबाट सफा कपडामै हिडेको थिए, तर मेट्रो स्टेसन पुग्दा हिलोले नुहाइसकेको थिएं । यो पाँच मनिेटले मलाई भित्रैदेखि हल्लाएको छ । मेरा लागि यो कति भयानक थियो, जसको शब्दमा सम्झाउन सक्दिन ।
रातको साढे १० वजे र त्यो पाँच मिनेटको बाटो हामीले आफ्नो सोच कस्तो बनाएका छौं भन्ने कुराको यो समाजको ऐना हो । मलाई कसैले छोएन पनि तर, आफूलाई लुटिएको महशुस गर्दैछु । हामी केटीलाई पाँच मिनेट सुरक्षित माहौल दिन नसक्नेले के बलात्कारबाट बचाउने डिङ्ग हाक्नु ? (अमर उजालाबाट)
पूर्वसञ्चारमन्त्री बास्कोटाको घर नजिकै बम विष्फोट